စိတ် သဘောထား ကွဲလွဲ မှုတွေ နဲ့ ချစ်သူ သားဂန်း ကို ဝေဖန် ပြောဆို​ နေကြတဲ့ အပေါ် ပြန်လည် ရှင်းပြလာခဲ့တဲ့ “ဘေဘီမောင်”…. – Shwe Naung
စိတ် သဘောထား ကွဲလွဲ မှုတွေ နဲ့ ချစ်သူ သားဂန်း ကို ဝေဖန် ပြောဆို​ နေကြတဲ့ အပေါ် ပြန်လည် ရှင်းပြလာခဲ့တဲ့ “ဘေဘီမောင်”….
N N | March 10, 2021 | Celebrity | No Comments
မော်လ်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင် က အနုပညာ ငွေကြေးထဲ ကနေ မကြာခဏ ဆိုသလို အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို တတ်နိုင် သ လောက် အလှူအတန်း တွေ လှူဒါန်းပေးတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေဘီမောင်နဲ့ ချစ်သူ သားဂန်းတို့က လတ်တ လော မှာ တရား မျှတတဲ့ ဒီမီုကရေစီကို ပြန်လည် ရှင်သန်နိုင် ဖို့အတွက် အဖက်ဖက်က ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေတဲ့
အချိန်လေးမှာ တာဝန်သိ ပြည်သူ တစ်ယောက် အနေဖြင့် ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ တစ်သားတည်း အပြည့်အဝရပ်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူထုလှုပ် ရှားမှုမှာပါဝင်ရင်း အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်းတွေ အတွက် အလှူငွေ များကို ဘေဘီမောင်တို့ ချစ်သူ တွေက ကူညီလှူဒါန်းပေးတာ တွေ့ ရပါတယ်။
ချစ်သူ နှစ်ယောက် တိုင်းပြည် အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ လုပ်ဆောင် ပေးနေတဲ့ အ ချိ န်လေးမှာ ချစ်သူသားဂန်းကို သဘောထား ကွဲလွဲပြီး ဝေဖန်နေ ကြတဲ့အပေါ် ​ဘေဘီမောင်က အဖြစ်အမှန် တွေကို ပြန်လည်ရှင်း ပြလာ ခဲ့ ပါတယ်။
“ကျွန်မရဲ့ချစ်သူ သားဂန်းက တအားအနေ အေးသူပါ ဒါမဲဲ့သူက ဆန္ဒမ ပါရင် ဘာတစ်ခုမှ စိတ်လိုလက်ရ လုပ်တဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး ရှင်…..
ခုလိုမြင်ရ ကြားရတာ စိတ် တကယ့် တကယ် ထိခိုက်ပါတယ်ရှင်… ကျွန်မတို့၂ဦးလုံးက စိတ်ဆန္ဒမ တူညီရင် ဘယ်ပရဟိတမှ လုပ်မယ့် သူတွေမဟုတ်ပါဘူး……အခုလို ပရဟိတ တိုင်းမှာ ၂ဦး၂ဖက်သဘောတူကြည်ဖြူ ဆုံးဖြတ်ပြီး ရှေ့တက်ကြတာပါ……
သူရဲ့အကောင့် တကယ် လော့ကျနေပါတယ်…. ခုလိုချိန်မှာ လိုသူ ရော မလိုသူရော ရူပ်ထွေးနေတဲ့အတွက် ကျွန်မအကောင့်မှာ စိတ်တူကိုယ်တူ စုံတွဲပုံ များနဲ့တကွ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က တိုက်ပွဲ ဝင်နေပါတယ်…..စိတ်သဘော ထားမကွဲလွဲစေချင်ပါဘူးရှင်…. .
သူ့ဆန္ဒမပါဝင်ပဲ အခုလို ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ် နိုင်လို့ ချစ်သူခင်သူကြား သဘောထား မကွဲလွဲစေချင်လို့ တောင်းပန် မေတ္တာရပ် ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဆိုပြီး ရေးသား ထားပါတယ်။
ကဲ..ပရိသတ်ကြီးလည်း ပရဟိတ အလုပ်တွေကို တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ လုပ်ကိုင် ပေးနေကြတဲ့ ဘေဘီမောင် တို့ ချစ်သူ နှစ်ဦးကို ဆုမွန်ကောင်းလေး တောင်းပေး လိုက်ပါဦး။
ကြည့်ချင် လောက်အောင် ဆက်ဆီ ကျကျ မိမိုက် နေတဲ့ ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ ဗီဒီယို
တဖြေးဖြေး နဲ့ ရေအောက်ထဲ ကပေါ် ထွက်လာတဲ့ အလှတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အားပြင်းနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို တင်လိုက်တဲ့ Lလက်ရှား